အနောက်အဖွင့်အပြန့်သရ - ဝီကီပီးဒီးယား
(Open back unrounded vowel မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
အနောက်အဖွင့်အပြန့်သရ (အင်္ဂလိပ်: open back unrounded vowel) သည် အပြောဘာသာစကားတစ်ချို့တွင်အသုံးပြုသော သရသံအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်၍ နိုင်ငံတကာသဒ္ဒဗေဒအက္ခရာတွင် ⟨ɑ⟩ ဟူ၍လည်းကောင်း စကားသံအကဲဖြတ်နည်းလမ်းများဆိုင်ရာ ထပ်တိုးအက္ခရာ (X-SAMPA) တွင် A အဖြစ်လည်းကောင်း တင်ဆက်ရေးသားသည်။ ⟨ɑ⟩ သည်a၏ လက်ရေးမူဖြစ်၍aသည် ပုံနှိပ်မူဖြစ်ကာ အခြားသရတစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုဖော်ပြပေးသည်။ နောက်ထပ်ရောထွေးနိုင်သော သရတစ်ခုမှာ လက်ရေးမူ ɑ ကို ပြောင်းပြန်ရေးသားထားသော ɒ ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ယခုဖော်ပြပါသရ၏ အဝိုင်းသရဖြစ်၍ အနောက်အဖွင့်အဝိုင်းသရ ဟုခေါ်သည်။
အချို့သောဘာသာစကားများ (အဇာဘိုင်ဂျန်၊ အက်စတိုးနီးယား၊ လူဇင်ဘာ့၊ တော်ဒို) တို့တွင် အနောက်အဖွင့်နီးပါးအပြန့်သရရှိ၍ ([ɑ] နှင့် [ʌ] ကြားရှိ သရသံ) သဒ္ဒဗေဒအရ ⟨ɑ̝⟩ သို့ ⟨ʌ̞⟩ အဖြစ် ဖလှယ်ရေးသားနိုင်သည်။
လင်ဘားဂစ်ရှ် (Limburgish[မှတ်စု ၁]) ဘာသာစကား၏ ဒေသယိစကားဖြစ်သော ဟားမော့န်-အေချယ်စကား (Hamont-Achel dialect) တွင် အရှေ့၊ အလယ်၊ အနောက် အဖွင့်အပြန့်သရများကို ခွဲခြားထွက်ရှိကြသည်ဟု သိရသည်။ ဤသည်မှာ ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ အလွန်ထူးခြားလှသည်။
ဤသရသံသည် မြန်မာဘာသာစကားရှိ (အာ-သရ) သံနှင့် တူညီသည့်အနေအထားရှိ၍ အင်္ဂလိပ်စကားလုံး calm ထွက်ရှိသကဲ့သို့ဖြစ်ကာ မြန်မာဘာသာစကား၌ လျှာသည် အနည်းငယ်ရှေ့သို့ ပိုရောက်သည်။
↑ Mokari & Werner (2016), p. 509.
↑ Asu & Teras (2009), p. 368.
↑ Gilles & Trouvain (2013), p. 70.
↑ Shalev, Ladefoged & Bhaskararao (1993), p. 92.
↑ L. E. Armstrong and Pe Maung Tin (1925)။ A Burmese Phonetic Reader: With English translation။ The London Phonetic Readers။ London: University of London Press။ ɑ isalittle nearer in tongue position to Cardinal Yowel No.5than to Cardinal Yowel No. 4. It is veiy like the normal English sound ofain calm.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အနောက်အဖွင့်အပြန့်သရ&oldid=675834" မှ ရယူရန်
၂၈ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၁၉:၄၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၁၉:၄၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။